Adobe photoshop cc14 full version portable | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Adobe photoshop cc14 full version portable
Adobe photoshop cc14 full version လေးကို portable လေးတွေ့ လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘာကီးမှထည့် စရာမလိုပဲ အမြဲ တမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။32 bit &amp; 64 bit နှစ်မျိုးခွဲ ထားတဲ့ အတွက် မိမိတို့ နှစ်သက် တဲ မိမိတို့ စက်နဲ့ ကိုက်ညီမှူရှိတဲ့ ကောင်ကိုဒေါင်းလုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့660 mb ကျော်ကျော်ရှိပါတယ်။ သူ့ မှာဘာတွေပါဝင်လာသလဲဆိုတာတော
Issue running actions with Generate&gt;Image Assets enabled
download ယူရန်&gt; 32 bit – link 1 , link 2
download ယူရန်&gt; 64 bit link 1 , link 2
This entry was posted in Photoshop Software. Bookmark the permalink.
← Notification panel လိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ widget: Edge Pro Quick Actions
Microsoft Word 2013 အသုံးပြုနည်း မြန်မာလိုစာအုပ် →